Oogur: Rụpụta ma Sochie URL Mgbasa Ozi Google | Martech Zone
Oogur: Rụpụta ma Sochie URL Mgbasa Ozi Google Analytics gị
Friday, February 2, 2018 Friday, February 2, 2018 Douglas Karr
Ndị na-ere ahịa na-eme mkpọsa site na plethora nke ọwa na ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla jiri Google Analytics n'oge a. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ngwanrọ dị ka ndị na-enye ọrụ na-etinye nsuso URL mkpọsa akpaghị aka, ọtụtụ ka na-ahapụ ya ka ndị marketer mejupụta njikọ ha na Nchịkọta UTM Google Analytics.
Iwulite njikọta mkpọsa gị dị oke mkpa, ọkachasị ugbu a na Google anaghị enye ozi dị oke mkpa na ndị ọrụ Google abanyela na nke ọ bụla. A maara nke a dị ka okporo ụzọ gbara ọchịchịrị ebe ọ bụ na ị nweghị ike ịgwa ebe ma ọ bụ otu esi abịa. Iji zere nke a, ịkwesịrị ịgbakwunye ọnye UTM ma wuo URL Mgbasa Ozi Google. Ọ bụrụ na ị na-eme mkpọsa n'ofe email, Facebook, Twitter, ịkpọ-to-action, mgbasa ozi, na ọwa ndị ọzọ… ịkwesịrị wuo URL ọ bụla nke mgbasa ozi gị maka atụ ọ bụla. Nke ahụ na-akụda mmụọ ma na-ewe oge. Ruo ugbu a…
Oogur na-ewuli URL niile nke Mgbasa Ozi Google gị na otu, mmekọrịta enyi na enyi. Na Oogur, ị nwere ike:
Mee - Jiri oogur URL wuru ewu URLs akpado na-agbanwe agbanwe UTM parameters.
track - Sochie oke UTM na URLs wuru n'otu ebe - ọ bụghị mpempe akwụkwọ.
Report - Nweta nghọta ka ukwuu na data mkpọsa na nchịkọta Google site na ibelata ọnụọgụ okporo ụzọ gbara ọchịchịrị na akụkọ.
Oogur na-ewere usoro ntuziaka, usoro na-adịghị mma nke ịmepụta njikọ ndị na-eso ụzọ ma na-eme ka ọ dị mfe. Dị ka dijitalụ marketer, oogur na-enye m ohere ịchekwa oge ụlọ ọrụ mgbasa ozi URLs na mass scale, nke buru ibu. Nsonaazụ njedebe bụ arụmọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma nke na-eme ka ọ dị mfe ịhụ ụdị ụdị ọdịnaya na-eme nke ọma. Aga m asị na ị na-enye oogur a shot ”Derek McClain, Digital Marketing Manager Ngwọta Ọkwọ ụgbọala
Etu esi eji Oogur wuo URL di iche iche akpado na UTM Param
Chekwaa oge buru ibu site n’iwu na ijikwa URL na mkpado UTM n’otu ikpo okwu karịa ndị na-ewu mpụga, mpempe akwụkwọ, na mkpirisi URL.
Mee otutu URL n'otu oge
Weghachi akara UTM ị na-eji maka ịkọ akụkọ na-agbanwe agbanwe na nchịkọta Google
Ngwa ngwa Oogur bụ ekwenti eji arụ ọrụ, n’adịghị ka mpempe akwụkwọ
Akụkọ Mgbasa Ozi Nchịkọta Google na-amalite inye gị nkọwa ọzọ, nghọta bara uru mgbe ị na-eji mkpado UTM iji chọpụta njirimara mgbasa ozi na URL gị - belata ọnụ ọgụgụ nke "okporo ụzọ gbara ọchịchịrị"
Oogur wuru ndị ahịa maka ndị na - ere ahịa - na - aga n’ihu n’ihu iji gboo mkpa ndị ahịa
Na, site na nkwado oogur, ị na-akwado azụmaahịa Teknụzụ Nwanyị Nwaanyị. Oogur bụ onye Nicki Laycoax guzobere, bụ enyi m ogologo oge.
Site na otutu ndi mmadu n’otu anyi jiri igwe na-eweputa ihe, ma nwekwaa ihe di nkpirikpi na ufodu n’ime ha na iji plugins nke Chrome ha o siri ike ichoputa oru nile anyi n’eme. Wee tinye na mpempe akwụkwọ iji depụta ha niile, ọbụlagodi n'ime imekọ ihe ọnụ dịka Office365 ma ọ bụ Google Docs, na usoro a adịghị mma. Rụ ọrụ n'ime otu ikpo okwu maka ọrụ ndị a niile abụrụla nnukwu uru. Chris Theisen, Onye njikwa akpaaka, BlueSky Dijitalụ
iji Oogur, nchịkọta Google Analytics gị na-agbanwe agbanwe ma jupụta na ọnụọgụ maka nsonaazụ dị mma:
Debanye aha tupu February 28, 2018, soro @oogurit na tweet "FRIEND-OF-DKNEWMEDIA", ma ị ga-enweta 10% pụọ na ndụ nke ndenye aha gị!
Banye maka a nnwale efu!
Ngosipụta: Enyere Derek na Chris ohere ịnweta oogur.com dịka akụkụ nke otu onye ọrụ beta. Ndị ọrụ abụọ a enyerela aka ịnwale ngwa ahụ na ịnye nzaghachi bara uru iji nyere ndị otu aka echiche maka nkwalite ịgbakwunye oogur iji mee ka ikpo okwu bụrụ nke ọma maka ndị ahịa. Akwụghị Derek na Chris ebubo maka ikike ha iji gbanwere nzaghachi ha n'eziokwu iji soro ndị ahịa dị ka gị kerịta.
Tags: onye na-ewu mkpọsaokporo ụzọ gbara ọchịchịrịGoogle Analyticsgoogle mkpọsa url onye na -ewu iheoogurusoro utm
Ebumnuche Ebumnuche Ebumnuche Nchọgharị: Somefọdụ Na-enye Ndụmọdụ SEO Na-adịghị Anya
PacketZoom's Mobile Expresslane CDN esoro Amazon Cloudfront
Ezeki Nwigwe (@Nkechi_Okechi)
Feb 3, 2018 na 5:14 PM
Daalụ maka ịkekọrịta, Doug!